ပြန်သုံးနိုင်သော RFID Tie Tag ကို, ပြန်သုံးနိုင်သောလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို, Reusable RFID Cable Tie Tag, Reusable UHF Tie Tag
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို Reusable RFID Cable Tie Tag, ပြန်သုံးနိုင်သော RFID Tie Tag ကို, ပြန်သုံးနိုင်သောလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို, Reusable UHF Tie Tag
Reusable RFID Cable Tie Tag.
tag ကို chip ကို: NXP G2XM (စီမံကိန်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောချစ်ပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်)
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော: EPC Class1 Gen2 (ISO18000-6C)
operating အကြိမ်ရေ: 902~ 928MHz
မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်: EPC 96Bits; TIME က 96Bits; အသုံးပြုသူ 512Bits
စာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး: 3~5မီတာ
ဒေတာကိုသိုလှောင်မှုအချိန်: 10 နှစ်ပေါင်း
Eraser ကြိမ်: 100000 ကြိမ်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40℃ ~ + 80 ℃
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 65X20X2.5mm, လည်စည်းအရှည် 100mm
The signage part of the UHF cable tie is located at the outside of the bundle, and is not affected by the material of the bundled material. It is stable to read and is convenient to use. Resistant to moisture, အပူချိန်မြင့်, စသည်တို့ကို, can be used in harsh environments.
Repeatable multiple use, can be used for vehicles, assets, fishing boat identification and other projects.
I am interested in your product Reusable RFID Tie Tag, ပြန်သုံးနိုင်သောလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို
prev: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, လုံခြုံရေးအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
နောက်တစ်ခု: တစ်ခါသုံး RFID Tie Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို